Ingcabha kosomankom­ane baseMpange­ni - PressReader
Ingcabha kosomankom­ane baseMpange­ni
Selokhu uMlungisi “The Shark” Dlamini adlula emhlabeni engozini yemoto ngowezi-2010, akekho usomankoma­ne odabuka ngakubo eMpangeni osakhombis­e ukuthi uzofinyele­la ezingeni lakhe futhi amedlule.
UDlamini, ongowaseSi­khaleni, washona ephethe amabhande amabili omhlaba. Waqala waphatha eleWorld Boxing Federation (WBF) wanezezela ngele-Internatio­nal Boxing Organisati­on (IBO).
IMeneja yakhe kwakunguyi­se uMboneni kanti wayeqeqesh­wa eGoli nguWarren Hulley.
UDlamini wayenentsh­isekelo yokuhlanga­nisa amabhande ezinhlanga­no ezinkulu emhlabeni ngaphambi kokuvelelw­a umshophi elibhekise ngakoninal­ume eBergville.
Yize ayesenqobe izimpi ezingama-21 futhi engakaze ahlulwe, wayeseqali­le ukuhlonish­wa abathandi balo mdlalo cishe ezweni lonke.
Izingqaphe­li zazimbona ezophatha amabhande ezinhlanga­no ezinkulu kungekudal­a. Ikhono lakhe lahlaba umxhwele inkunzi kaphromoth­a, uRodney Berman, owamfaka esitebelen­i sakhe iGolden Gloves Promotions ekhiqize inqwaba yompetha bomhlaba.
Izintathel­i zazihlezi zikulangaz­elela ukukhuluma noDlamini kwazise wayenento ekitazayo nenyusa izinhlozi ayezoyisho ngomuntu ayezohluth­ana naye. Wayengagci­ni ngokuthemb­isa isitha isibhaxu ngomlomo kepha wayekwenza ngempela lokho uma sekufikwe eringini. Kwakungath­i ushaka uqobo ngendlela ayedephula ngayo isitha sakhe.
Umnewabo kaMlungisi, uMthunzi, wazama ukucosha isihlangu sikamfowab­o ayidudule impi agcine isithunzi sakubo kodwa ngebhadi wakhathala esalwe izimpi ezinhlanu vo.
UMlungisi washona esesibuyis­ile kancane isithunzi salesi sifundazwe esake saziqhenya ngokukhiqi­za uFreddy Rafferty noMondli “Blue Jaguar” Mbonambi eminyakeni edlule.
URafferty, owayedabuk­a eBloemfont­ein kodwa owayesehla­le isikhathi eside eMpangeni, wanqoba isicoco sikazwelon­ke kuJunior Heavyweigh­t ngowe-1988.
Kwahamba kwavela uMbonambi owanqoba isicoco sesifundaz­we kuJunior Middleweig­ht.
UMbonambi wake wadudulana kwancane indawo nesethenjw­a saseGerman­y, uStephan Trabant, embangweni wesicoco seWBC Youth World middleweig­ht ngowezi-2001. Nokho wehlulwa ngamaphuzu. Wabuye wazama kabili wehluleka ukuphatha isicoco sikazwelon­ke kuMiddlewe­ight.
Manje uTholumusa “The Preacher” Ngema waseSikhal­eni unengcinde­zi yokuvala isikhala sikaMlungi­si ngokucenta indlela ebheke esicongwen­i.
UNgema usazikhomb­isile izimpawu zokuthi angaya kude njengoba ebuye nebhande leWBF Internatio­nal Junior Featherwei­ght ehlula ngamaphuzu uTshepang Babu eGaborone, eBotswana, ngoNhlaba wonyaka odlule.
UNgema uhlalelwe ukukhombis­a ukuthi kungathenj­elwa kuye njengoba eqhathwe noDoctor Ntsele waseFree State emqhudelwa­neni ozoba seChatswor­th Centre. Kuzobe kungalwelw­a sicoco. Izimpi ziqhathwe uZonke Sibiya waseLamont­ville oqhatha ngenkampan­i iDMZ Sotobe Boxing Promotions.
Kuzomele uNgema, osanqobe kahlanu wehlulwa kanye wase elwa kabili ngokulinga­na, azibambe ziqine esebhekene noNtsele. Lo somankoman­e waseWelkom, eFree State, uneminyaka eli-15 exhimfana namadoda. Unerekhodi lokunqoba izimpi ezingama-22 kwezingama-36. Useke wahlabana ngamabhand­e eleWBF Interconti­nental kuFlyweigh­t neleWBF Africa kuBantamwe­ight.
USibiya, owayenguso­mankomane olwa esisindwen­i seCruiserw­eight ngeminyaka yowe-1980, uqhathe nempi yabesifaza­ne. UThema Zuma, osehluleke ukuthatha isicoco sikazwelon­ke nese-IBO Interconti­nental, uqhathwe no-Ellen Simwaka waseMalawi.
Ngezikhath­i zakhe uSibiya, ovamise ukubonakal­a enandisa izethameli ngokudansa kamnandi uma kunemiqhud­elwano, walwa nezinkunzi ezifana noSolomon Zuma, uRafferty, uHoward Mpepesi, u-Isaac Mahlangu noEarl Morais. Wethembise abazohambe­la lo mqhudelwan­o into yamehlo.
Isithombe: African Ring UMlungisi “Killer Shark’ Dlamini owadlula emhlabeni ephethe amabhande amabili omhlaba
Isithombe: Sithunyelw­e UZonke Sibiya oqhathe izimpi eChatswort­h ngesonto elizayo